Date My Pet » Ahoana no hanoroka Via Zodiaka Sign
amin'ny Nic Gaudette
Last nohavaozina: Sep. 24 2020 | 3 min namaky
Ny oroka voalohany amin'ny olona iray ianao dia iray amin'ireo fotoana farany amin'ny budding fifandraisana, ary zavatra roa foana ianareo hahatsiaro. Raha manana ratsy oroka voalohany, misy matetika dia tsy misy sitrana avy izany. Vakio ao ny hahita ny fomba tokony hanoroka ny daty voalohany:
Rehefa aloha hanoroka ny Aries, matetika ianao tsy mila miahiahy ny Mandeha mafy loatra na miandry ny fotoana marina. Raha te hanoroka azy ireo, hanao izany raha tsy nisalasala. Dia mankasitraka anao naka fotoana sy ny ho mivantana. Ataovy mafana sy ny mpankafy. Na dia tokony hahafantatra, dry zareo voalohany angamba hanoroka anao.
Rehefa aloha hanoroka ny Taurus, te-hiandry. Aza manao izany haingana, ary aza manao ny oroka mafana sy ny fifadian-kanina. Izao no famantarana ho miadana aleony may, ka ataovy farany. Tsy haka ny voa, ka ianao no mila manampy. Tapaka lalan-dra na manoroka ny hatony eo anatrehanao manoroka ny molotra mba ho tena mahazo azy ireo any.
Rehefa aloha hanoroka ny Gemini, lazao aminy te-hanoroka azy ireo aloha. Izany famantarana mamaly ny teny tsara kokoa noho ny hafa. Hibitsibitsika seductively teo anatrehany;, dia nibble izany. Hihinana eny ny sandriny, na mihazona ny tananao (samy nitondra ny Gemini). Ny sasany dia avy hatrany ireo Geminis voalohany, fa matetika ry zareo rehetra ary tsy misy avy hatrany ireo mpanadala, izany ianao dia tsy maintsy.
Rehefa aloha hanoroka ny Cancer, Tokony ho fantatrao ianao ry zareo nentin-drazana na tahaka aina manodidina, ka hanao izany amin'ny faran'ny ny daty ny tokonam-baravarana. Rehefa nanoroka azy ireo, mihazona azy ireo ny fitaovam-piadiana izy ireo ka tsy hanan-tahotra sy ho voaro. Tsy ho foiko amin'ny ela loatra, ary aza ho mahafantatra ny korontana.
Rehefa manoroka ny Leo aloha, ataovy toy ny miavaka araka izay azo atao. Famantarana izao fiainana te ho toy ny sarimihetsika, ary dia ho diso fanantenana amin'ny zavatra mahazatra sy mankaleo. Hanoroka azy ireo ambanin'ny Moonlight, ao ny ranonorana, na eo afovoan'ny eny an-dalambe. Ho azy io hisy fy, ary nakarina avy.
Rehefa aloha hanoroka ny Virgo, jereo ny fofonaina mialoha. Raha nandeha nisakafo, namely ny efitra fandroana talohan'ny nandehanany mba hahazoana antoka na inona na inona dia niraikitra tao ny nify ary afaka no tsapako ny solila na mampiasa mouthwash. Tsy misy hampiala azy tokoa mihoatra noho ny nanoroka ny maloto vava. Tsara manao teknika, satria tena mahafantatra ny zavatra.
PEJY: 1 2